ओली समूहमा नेताको खडेरी, पोखरेल र नेम्वाङ सर्वस्वीकार्य हुन नसक्ने - नेपालबहस
ओली समूहमा नेताको खडेरी, पोखरेल र नेम्वाङ सर्वस्वीकार्य हुन नसक्ने
| १३:३९:२१ मा प्रकाशित
२५ माघ, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहमा नेताको खडेरी लागेको छ ।
माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको समूहमा नेताहरुकाे संख्या धेरै भएको र पार्टी हाँक्ने नेताहरु पनि उलेख्य भएको अवस्थामा ओली समूहतिर ओली मात्रै नेताको रुपमा देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीपछि सो समूहको नेता को हुने भन्नेमा अझै अन्यौल रहेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलको पक्षमा ओली समूहकै धेरै नेताहरु खुल्न नसकेको बेला पोखरेललाई उछिनेर अरु नेताहरु पनि तत्कालै नेतृत्वमा आउने संभावना छैन ।
विगत एक महिनायताका सबै सार्वजनिक कार्यक्रममा ओली प्रमुख वक्ता भएका छन् । ईश्वर पोखरेल वा सुवास नेम्वाङ कोही नेता प्रमुख वक्ता भएर सहभागी भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओली आफू सबैजसो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि र प्रमुख वक्ता भएको बेला पोखरेल दोस्रो र तेस्रोमा रामबहादुर थापा वादल वक्ता देखिएका छन् ।
ओली समूहमा देखिएका नेताहरुमा पोखरेलका अतिरिक्त रामबहादुर थापा वादल, सुवास नेम्वाङ, महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्यहरु शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञावाली, त्यसपछि गोकुल बाँस्कोटा, खगराज अधिकारी,महेश बस्नेत, वा भानुभक्त ढकाल मात्रै छन् । पूर्व माओवादी समूहबाट आएका टोपबहादुर रायमाझी वा लेखराज भट्टले नेतृत्व सम्हाल्ने अवस्था छैन् । उनीहरुले संगठन विस्तार गर्ने विषय पनि गौण बन्दै गएको छ ।
यसरी हेर्ने हो भने ओली मात्रै एउटा ‘फष्ट म्यान’का रुपमा देखिएका हुन् । केशव बडाल वा सोमनाथ प्यासीहरुले संगठन बनाउने अवस्था छैन । त्यस्तै पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङहरुलाई ओली समूहले फष्टम्यान स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । पूर्व माओवादी समूहबाट आएकाहरु प्नि फष्टम्यान बन्ने अवस्था पनि छैन ।
विष्णु पौडेललाई शंकर पोखरेलहरुले फष्टम्यान स्वीकार गर्ने अवस्था छैन् । सुवास नेम्वाङले सबैलाई समट्न नसक्ने र ईश्वर पोखरेल संकुचित मानसिकता भएकाले फष्टम्यान हुन नसक्ने भएकाले ओली समूहमा सर्वस्वीकार्य नेतृत्वकाे अभाव भएको हो ।
देशभर ओली समूहले आफ्नो संगठन विस्तारका लागि आफै भाषण दिएर हिड्न थालेका छन् । किसान संघको सभादेखि युवा विद्यार्थीहरुको भेलासम्म ओली सिंगलम्यान र फष्टम्यानका रुपमा देखिएका छन् । सबैतिर अरु नेताको भाषण भन्दा ओलीकै भाषण सुन्न मानिसहरु जम्मा हुने गरेका छन् ।
दाङमा शंकर पोखरेलले ओलीलाई लगेर पुल उद्घाटन गराए, पर्वतमा सवस्टेशन उदघाटन गर्न ओली नै सहभागी भए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले नै सो परियोजना उद्घाटन गर्न सक्थे वा ऊर्जामन्त्रीले नै गर्न सक्थे । तर ओलीले राज्यका सबै अङ्गलाई दुःख दिने काम गरे । प्रतिघण्टा एक लाख ५० हजार बराबरको भाडा पर्ने सेनाको हेलिकप्टर दुरुपयोग गरे ।
बिहीबार उनले त्यसैगरी राज्यको स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्दै पर्वतको कुस्मा पुगे । प्राधिरकणले ५० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको बताएको प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरे ।
उनले चुनाव घोषणा गरेपछि विकासे कार्यक्रम उद्घाटनदेखि कार्यकर्ताको भेलासम्ममा आफै भाषण दिन पुग्छन् । भर्खरै मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री ओली आफै यसरी दौडिएका छन् कि मानौ उनी फेरी पनि राज्यको बागडोर सम्हाल्न आउँदैछन् । तर पार्टी विभाजन भएपछि भने उनी सत्तामा पुग्ने संभावना कमजोर बन्दै गएको छ । तर पनि ओली राज्यशक्तिको समेत प्रयोग गरेर देश दौडाहमा लागेका छन् । उनी अब हुने बुटवलको सभा र विराटनगरको सभामा समेत सम्बोधन गर्न पुग्दैछन् ।
शुक्रबार राजधानीमा भएको आमसभा पनि उनकै भाषण सुन्न कार्यकर्ताहरु लालयित भएको देखिन्थे । काठमाडौको कार्यक्रममा ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा बादल खासै जम्न सकेनन ।
उनीहरुको भाषणमा खास दमदार नभएपछि आयोजकले नै छोट्याउन आग्रह गरेका थिए । ओलीले मात्रै सवा घण्टा भाषण गरेका थिए ।त्यतिमात्र होइन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारको कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले विकास निर्माणका काम, घोषणा, शिलान्यास, उद्घाटनसमेत गर्न पाउँदैनन् । नियमित प्रधानमन्त्री जसरी नै कानुन, विधि र संविधानमाथि बलात्कार गर्दै हिँडेका ओलीले मञ्च पाएपछि कम्तीमा सवाघण्टा भाषण दिने गरेका छन् ।
कुसुम विश्वकर्मा नेपालबहस डटकमका लागि राजनीति तथा समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछिन् ।फुलवारी एफएमदेखि रेडियो पत्रकारिता शूरु गरेकी कुसुमले रासस, रेडियो अन्नपूर्ण र देशान्तर एफएममा पनि काम गरेकी छन् । केही समय उनले नाइस टीभीमा समाचार प्रस्तोताको रुपमा पनि कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निभाएकी थिइन् ।
बालुवाटारमा ओली र वामदेवको भेटवार्ता १ दिन पहिले
ओली सांसदहरुसँग छलफल गर्दै १ दिन पहिले
ओलीले हटाए देव गुरुङलाई १ दिन पहिले
सरकार र चन्द समूहबीच वार्ता असहज १ दिन पहिले
फेरि पनि चुनावकै चर्चा १ दिन पहिले
आज साँझ ५ बजे क्याबिनेट बस्दै १ दिन पहिले
कुटपिट गरी गर्भपतन गराएको आरोपमा तीन जना पक्राउ ७ मिनेट पहिले
देशको राजनीतिमा नैतिकपतनको प्रश्न पेचीलो बन्नु चिन्ताको विषय : जबरा १५ मिनेट पहिले
नेपालसहित तीन मुलुक स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस १० घण्टा पहिले
३० वर्षपछि झापामा पहिलो रबर उद्योग स्थापना १० घण्टा पहिले
प्रतिनिधिसभा बैठक २३ गते बोलाउन सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय १२ घण्टा पहिले
निर्वाचनमा राजनीतिक दललाई अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा आयोगको जोड १ दिन पहिले
पर्यटन व्यवसायीको गुनासो सुन्न सरकारलाई टानको आग्रह ४ दिन पहिले
बजारमा सुनको मूल्य तोलामा ८ सयले वृद्धि ६ दिन पहिले
अस्पतालका लागि २८ रोपनी जग्गादान ४ दिन पहिले
प्रदर्शनीमा राखियाे पहिलो पटक भ्यान गखको प्यारिस चित्रकला १ दिन पहिले
लैंगिक उत्तरदायी अनुसन्धान तथा संचारका सीप प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सम्पन्न १ दिन पहिले
म्याग्दीका ग्रामीण सडकमा कालोपत्रे शुरु २ दिन पहिले
मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने गर्न हुदैन : नेता पौडेल ४ हप्ता पहिले
हरिभक्त सिग्देलको नविनतम कृति ‘गौराङ्ग’ विमोचन ३ हप्ता पहिले
विप्लब समूहका नेता बाँस्तोलालाई थुनामुक्त गर्न आदेश ३ हप्ता पहिले
कांग्रेस नेकपाका दुवै समूहसँग तत्काल मौन रहने १ दिन पहिले
आज थप १२२ जनामा संक्रमणको पुष्टि २ हप्ता पहिले
संयुक्त राष्ट्र संघले सुरक्षा परिषदको आपतकालिन बैठक बोलाए ४ हप्ता पहिले
भारतबाट अतिक्रमित भूमिमा बसेका नेपालीलाई नागरिकता दिइने ६ महिना पहिले
‘एन्जाइटी’ भनेको के हो ? याे किन हुन्छ ? ५ महिना पहिले
आज र भोलि मध्य र पश्चिमका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना १ वर्ष पहिले
महराको पक्षमा दुई दर्जन वकिल,थुनछेक बहस शुरु १ वर्ष पहिले